Zonke izingubo, izigqoko, izikhwama noma icala ethwele kalula engase aklonyeliswe ubuhlalu amahle shiny noma amatshe. Igama yabo okuyimfihlakalo kanye okufutshane - rhinestones. Le mihlobiso ziyingxenye ebalulekile ye lokubhalela cishe zanoma yiluphi uhlobo izingubo, izicathulo, electronics, nokuningi.
Indlela rhinestones benza
Mbumbulu ayigugu aye afunda ukuyenza kudala, ngeNkathi Ephakathi. Okokuhloba Georg Strass yasungulwa ingilazi Ukwakheka, okubandakanya phambili. Futhi angithandi nje ngingene, futhi wayekhona ngamanani amakhulu.
Lokhu ingilazi ezinemibala ehlukahlukene umdlalo Ukugqamisa isicwebezelisi high. It wasetshenziselwa kuphela ukukhiqizwa ezibizayo ubucwebe kanye mbumbulu amadayimane. igama Strasse wabiza ingilazi "unamathisele."
Namuhla, rhinestones, "amatshe mbumbulu" asetshenziswa kabanzi kakhulu. Interior izinto Decor, obunamaparele nabo, njalo bayindlala kakhulu. "Amatshe Inkohliso" kubukwe izinzipho, ubuso kanye nanoma iyiphi ingxenye yomzimba wakho. Ubucwebe, esebenzisa Swarovski zinhlayiya, ezazaziswa ezibizayo futhi baningi. Zisetshenziswa umhlobiso izesekeli ahlukahlukene. Expensive hhayi kakhulu izikhwama futhi amvikele, zonke izinhlobo nesembozo, amaketanga ayisihluthulelo - nomaphi lapho ungathola indawo amatshe acwebezelayo.
Rhinestones ngesembatho kubhekwe ngemfanelo imfashini besikhathi sethu. Ngoba noma yisiphi closet, noma kungaba i dress kusihlwa noma elula isikibha, ungakhetha ubukhulu kahle namatshe egqamile futhi ekhangayo. Ukuze uzibuze onjani ubuhlalu ezifaneleke uhlobo oluthile izingubo, odinga ukukwazi usayizi zinhlayiya. Lokhu kusiza kakhulu search for the impahla kwesokudla, futhi kuqinisekisa ikhwalithi wizadi enhle.
Ubukhulu rhinestones kudingekile ukuze ukucacisa inombolo efanele ubuhlalu ukusebenza, bafunde, kungakanani badinga for iphethini letsite, kanye ukuba baqonde indlela engcono akubeka. Okokuqala, kufanele ukhumbule ukuthi bonke osayizi lakala kulezi zihloko ezithi amamilimitha angu. Amatshe zihlukaniswe thunga, glue rhinestones emilenzeni.
zinhlayiya Sew kukhona ngesimo okweqanda, amaphampu lehla, amashidi, futhi ngesimo ezihlukile Jomethri. Kuhlanganisa rivoli. Kulomjikelezo Sew zinhlayiya anobukhulu kusuka 10 kuya ku-20 mm, okuyizinto uhamba kakhulu.
rhinestones Yesigcilikisha eze ngesimo cap, nenkabazwe, Octagon. Kodwa ukuma eziyisisekelo - crystal nge izici eziningi. Amatshe kuhluke bodwa usayizi nombala.
Ubukhulu Basic rhinestones
Thunga rhinestones. Emincane kakhulu - 7 mm, ngobukhulu - 50 mm. Konke kuncike Usayizi itshe. Uma-ke has simise Jomethri, ubukhulu imelelwa nenani elilodwa (isib 14 noma 16 mm).
Ayinhlama ngesimo amapheshana, izikebhe, iconsi kukalwa izinombolo ezimbili - ubude nobubanzi itshe (isibonelo, 10/18, 15/25 mm, njll ...).
rhinestones Yesigcilikisha. Lihlanganisa futhi Strass ibhande. Emincane kakhulu - 1.3 mm, futhi ngobukhulu - 14.5 mm. Amasayizi ethandwa iningi rhinestones: 2.7-2.9 mm, 3.8-4.0 mm, 6,32-6,5 mm.
Okunamandla emilenzeni futhi sibe isinqumo. Okunqumayo ngendlela efanayo ukuthi we amatshe ingcina (isib 3.4-3.6 mm).
Noma yimuphi isisebenzi onekhono uyazi yonke ithebula zinhlayiya futhi kalula ukunquma inani eliqondile ubuhlalu ofuna ukusebenza. Futhi ngamatshe letingemasayizi lahlukene lengqondo ekhulelwa ozuza ifomu kwesokudla futhi umthamo omuhle.
Amaphethini dolls foamirana: Master Amakilasi Wabasaqalayo
Indlela ukuthatha iphilisi? Sikucela kangcono le udokotela
Ukwelashwa nokuvikelwa periodontitis ekhaya amakhambi abantu (ukubuyekezwa)
Demilitarization - kuyini? I demilitarization komnotho